गम्भीर अवस्थाहरूमा कम रक्तचापले जीवन खतरामा पार्न सक्छ यसरी देखाउँछन् संकेत – Khabar PatrikaNp
गम्भीर अवस्थाहरूमा कम रक्तचापले जीवन खतरामा पार्न सक्छ यसरी देखाउँछन् संकेत
August 18, 2020 144
विराटनगर, २ भदौ । कम रक्तचाप तथा हाइपोटेन्शनले केही मानिसमा कुनै समस्या ल्याउँदैन ।
तर, धेरै मानिसहरू असामान्य रूपले रक्तचाप कम हुँदा चक्कर आउने तथा बेहोस् हुन सक्छन् । गम्भीर अवस्थाहरूमा कम रक्तचापले जीवन खतरामा पार्न सक्छ ।
९०/ ६० एमएमएचजी वा सोभन्दा कम भएमा यसलाई सामान्यतया निम्न रक्तचाप मानिन्छ । डिहाइड्रेसनदेखि गम्भीर मेडिकल डिसअर्डरहरू हाइपोटेन्शनका कारणहरू हुन सक्छन् ।
गर्भावस्था, मुटुको समस्या, रगतमा चिनीको मात्रा कम हुँदा, थाइराइड, शरीरमा पानीको कमी, चोट लागेका कारण धेरै मात्रामा रगत गुमाउँदा, संक्रमणहरूका कारण, विभिन्न एलर्जीका कारण तथा केही औषधीहरूको प्रयोगले गर्दा पनि रक्तचापमा कमी आउन सक्छ । उमेर, औषधिहरूको प्रयोग, मधुमेह, पार्किन्सन जस्ता रोगहरूले हाइपोटेन्शनको जोखिम बढाउने गर्छ ।
केही व्यक्तिहरूका लागि हाइपोटेन्शनले शरीरमा भएका विभिन्न समस्याहरूको संकेत गर्छ । विशेषगरी अचानक रक्तचापमा कमी आउँदा चक्कर आउने, बेहोस् हुने, धमिलो दृष्टि, वाकवाकी लाग्ने, थकान, एकाग्रताको अभाव जस्ता लक्षणहरू देखापर्न सक्छन् । विशेषगरी वयस्कहरूमा भ्रम, छालाको रंगमा परिवर्तन, श्वासप्रश्वास तीव्र हुने, कमजोरी तथा नाडीको गति छिटो हुने लक्षणहरू पनि समावेश छन् ।
गम्भीर अबस्थामा हाइपोटेन्शनले जीवनलाई जोखिममा पार्ने हुन सक्छ । गम्भीर रूपमा कम रक्तचापका कारण शरीरलाई कार्यहरू गर्न पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन प्राप्त हुँदैन, जसकारण तपाईंको मुटु र दिमागलाई नोक्सान पुग्न सक्छ ।
प्रायः मानिसहरूले हाइपोटेन्शनलाई वास्ता गर्दैनन् । तर, पटकपटक लक्षणहरू देखा पर्दा यसलाई वेवास्ता नगरी डाक्टरको परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ ।
हाइपोटेन्शनबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई नुनले मद्दत गर्छ । तर, हाइपोटेन्शन हुने कारणले फरक हुन सक्ने हुँदा एकैपटक धेरै नुनिलो खानु पहिला डाक्टरसँग जाँच गराउनु पर्छ ।
Prevकति हासनु होइट पुनय जि को मुख बनद
Next‍नाग देवताको दर्शन गर्दै भदौ ३ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस् ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस !
श्रीमतीका कारण डाक्टरशाहले छोडे संसार !
मंगलबार गणेश भगवानको व्रत बसेर यसरी पूजा आराधाना गर्दा धन प्राप्ति हुनेछ ..
सतीदेवीको गुहृय पतन भएको स्थानमा मन्दिरको गर्भगृह, गुह्येश्वरी मन्दिर
शिव भगवानकोआसुबाट भएको थियो रुद्राक्षको उत्पत्ति,जानौ शिव शंकरले धारण गर्ने तेस्रो नेत्र, रुद्राक्ष, डमरू, वासुकी, चन्द्र, गंगा आदिको महत्व
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33610)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25138)
एका बिहानै बिसाल नाग देवताको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ (21173)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20082)
काभ्रेमा रुहाउने दुर्घटना :2जनाको ज्यान गयो (17544)